Axle Video သည် MAM Solutions အတွက်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်စျေးနှုန်းချိုသာမှုကိုမြှင့်တင်ပေးသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အကြောင်းအရာဖန်ဆင်းခြင်း » ရိုးဗီဒီယိုပေးခဲ့သည် Solutions များအတွက်စွမ်းဆောင်ရည်များနှင့်တတ်နိုင်ဘားပေါ်ပေါက်
ဤလရဲ့ကုမ္ပဏီမီးမောင်းထိုးပြစက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့အလျင်မြန်ဆုံးကြီးထွားလာကုမ္ပဏီတွေရဲ့တဦးတည်းအပေါ်အလေးပေး, ရိုးဗီဒီယို။ ယခင်က SeeFile ၏စက်မှုလုပ်ငန်းစစ်ပြန်ဆမ် Bogoch (CEO ဖြစ်သူ), ပက်ထရစ် Gouttebel (ကုန်ပစ္စည်း Manager က) နှင့်စတိဗ်ရိုင်ယန် (ခဲအင်ဂျင်နီယာ), တို့ကစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, Mid-2012 အတွက်ကုမ္ပဏီ၏ရူပါရုံပုဖို့ရည်ရွယ်တာတခုပေးခဲ့သည် (မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲရေး) ဖြေရှင်းချက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဖြစ်တယ် shared သိုလှောင်မှုကို အသုံးပြု. သေးငယ်သောဗီဒီယိုသင်း၏များစွာသောထောင်ပေါင်းများစွာ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်။
အဆိုပါပုဂ္ဂလိကပိုင်ကျင်းပကုမ္ပဏီနှစ်ဆဂဏန်းနှစ်ကျော်နှစ်ခြင်းဖြင့်ကြီးထွားလာနှင့်ယခုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း 400 ဖောက်သည်အပေါ်ဂုဏ်ယူလျက်ရှိသည်။ ရိုးတိုက်ရိုက်ဖောက်သည်များနှင့်ပြန်လည်ရောင်းချသူများနှင့် OEM လိုင်းများမှတဆင့်နှစ်ဦးစလုံးရောင်းချပါတယ်။ ယင်း၏ပင်လယ်ရပ်ခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်း 100% ပြန်လည်ရောင်းချသူများ-based ဥရောပ, အာရှနှင့်လက်တင်အမေရိက၌တည်ရှိ၏။ အဆိုပါကုမ္ပဏီမကြာသေးမီကနှင့်အတူ OEM အပေးအယူစတင် လွန်စွာလိုလားသော နှင့်ရိုးရှင်းစွာအ, သောသူအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့၏နိမ့်ဆုံးကိုများနှင့်အလယ်အလတ်သိုလှောင်မှုစနစ်များနှင့်အတူ၎င်း၏ software ကို bundling နေကြသည်။
သူကမှာခဲ့သည့်အခါ CEO ဖြစ်သူ Bogoch အဆိုအရ '' အေ့ဟေအခိုက် '' သို့ရောက်လာသော လွန်စွာလိုလားသော အလွန်ပျော်ရွှင်ခဲ့ကြသူအ High-end ဖောက်သည်တွေနဲ့အများကြီးဆွေးနွေးခဲ့ဘဲလျက် လွန်စွာလိုလားသော'' s ကိုစနစ်များ, ဒါပေမယ့်အများအားဖြင့်ရရှိနိုင် tool ကို set ကို၏သေးငယ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းအစုကို အသုံးပြု. ခဲ့ကြသည်။ ထိုအချိန်က Apple ရဲ့နောက်ဆုံးဖြတ်ဆာဗာအလားအလာက်ဘ်ဆိုက်များတစ်အများကြီးပိုကြီးတဲ့အရေအတွက်ကပိုပြီးသေးငယ်အဖွဲ့များအဘို့ရည်ရွယ်တာတဲ့စနစ်တည်ရှိကြောင်းပြသခဲ့သည်။ Apple ကနောက်ဆုံးဖြတ်ဆာဗာရပ်စဲသောအခါ, စျေးကွက်အခွင့်အလမ်းကိုသူတို့နောက်ဆုံးပေါ်က်ဘ်ဆိုက်အသုံးပြုသူ interface ကိုနည်းပညာများကို အသုံးပြု. ဖွင့်လှစ် left သောကွာဟမှုကိုဖြည့်နိုင်မယ့်လာမယ့်မျိုးဆက် '' တတ်နိုင် '' ဖြေရှင်းချက်များအတွက်ဖွင့်လှစ်ကြောင်းချက်ချင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ခဲ့သည်။
ဆမ် Bogoch; စီအီးအို ရိုးဗီဒီယို
Said Bogoch, "ကျနော်တို့သောင်းချီအားကစားအသင်းများ, တက္ကသိုလ်များ, ကော်ပိုရေးရှင်း, ကြော်ငြာအေဂျင်စီများ, ဝတ်ပြုရာအိမ်များ, ထုတ်လွှင့်, နဲ့ post အိမ်များအပါအဝင်ဒီဖြေရှင်းချက်ကိုမှအကျိုးနိုငျသူအလားအလာက်ဘ်ဆိုက်များ, ထောင်ပေါင်းများစွာသောရှိခံစားရတယ်။ " ??
တတ်နိုင်ရိုးရှင်းမှု။ Solutions နှင့်အင်္ဂါရပ်များတိုးချဲ့ပလက်ဖောင်း။
အခုတော့ငါးနှစ်အကြာတွင်နဲ့စစ်မှန်တဲ့ '' လူတိုင်းအတွက်စျေးနှုန်း '' ဖြစ်ကြောင်းမီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှုဆော့ဖ်ဝဲကိုအစုံတစ်ဦး၏အရွယ်မှာပလက်ဖောင်းရာပူဇော်သက္ကာကို၎င်းင်း၏ရူပါရုံ, ရိုးဗီဒီယို's ဖြေရှင်းချက် ဒါကြောင့်အခြေခံကျကျရိုးရှင်းသောအသေးစားနှင့် Mid-size ကိုအသင်းများကိုရှာဖွေဘို့လုပ်နဲ့သူတို့ရဲ့မီဒီယာဖိုင်နှင့်အတူပူးပေါင်း။ ရိုးရဲ့ဖြေရှင်းချက်သိုလှောင်မှုဧရိယာကွန်ရက်များ (Sans), RAID နဲ့ hard drive တွေ, ချောမွေ့စွာပူးတွဲသိုလှောင်မှု (NAS) ကွန်ယက်အားချိတ်ဆက်, မီဒီယာဖိုင်တွေအတွက်အသုံးပြုသိုလှောင်မှုနီးပါးမည်သည့်အမျိုးအစားနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကြသည်။ ဒါဟာအစရေးလိုက်နှင့် LTO တိပ်ခွေကိုဖတ်ရှုရာများစွာကိုသိမ်းဆည်းစနစ်များ, မီဒီယာဖိုင်တွေမော်ကွန်းများအတွက်စက်မှုလုပ်ငန်းစံထောက်ခံပါတယ်။
Bogoch အဆိုအရ, ဗွီဒီယိုနှင့်အတူအလုပ်လုပ်သူအသင်းများကိုပုံမှန်အားမကြာခဏသူတို့ချင်ပါတယ်လမ်းကိုရှာပြန်သုံးနိုင်ခြင်းနေသောမြည်းကြိုးကိုဖြည် hard drive တွေအပေါ်, သိုလှောင်မှုအများအပြား terabytes ရှိသည်။ hard drive တွေချွတ်ဖို့ကုန်ကျစရိတ်-အကျိုးရှိစွာဖိုင်ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုကအခြားရွေးချယ်စရာအဖြစ်တန်ဖိုးနည်းသိုလှောင်မှုဆာဗာနေရာတိုင်းတွင်တွေ့နေကြားနေရပေးထား, ဖိုင်တွေဘယ်မှာဆာဗာပေါ်သို့ရွှေ့ပြောင်းနိုင်ပါသည် ရိုးဗီဒီယို'' s ကို software များကိုပြီးတော့သူတို့ရဲ့တည်ဆဲ folder ကို setup ကိုသုံးပြီးဖိုင်တွေကိုစီမံနိုင်သည်။ အဆိုပါ software ကိုအထူးနေရာများတွင်ဖိုင်များကိုအတွက်စစ်ဆေးရန်အသုံးပြုသူအတင်း, ဒါမှမဟုတ်မိုဃ်းတိမ်သူတို့ကို upload တင်မထားဘူး။ ထိုအသင်သည်မည်သည့် web browser ကို, စမတ်ဖုန်း, ဒါမှမဟုတ်တက်ဘလက်ကနေရယူနိုင်ပါတယ်။ ရိုးညာဘက်အသုံးပြုသူရဲ့ browser ကိုသို့ဤဖိုင်များကိုအစမ်းကြည့်ရန်ကိုထည့်လေ့မရှိနှင့်ပင်ကို Adobe Premiere ဘို့ plug-in panel ကိုရှိပါတယ်® FCP7နှင့် X တို့မှာအဘို့အ Pro ကို CC ကို, နဲ့ XML တင်ပို့မှု
အားလုံးဝင်ရိုးစနစ်များကို Adobe (Premiere Pro ကို, နိဒါနျး) နှင့် Apple (Final Cut Pro7နှင့်သဟဇာတဖြစ်ကြ®, နောက်ဆုံးဖြတ် Pro ကိုက X®) အယ်ဒီတာများ။ ဘယ်နေရာမှာမဆိုကို Adobe များအတွက် Compatibility ကို add ကြောင်းအထူး Configurations နဲ့ လွန်စွာလိုလားသော မီဒီယာ Composer / ဆငျဖိုနီ Workflows ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်လည်းဖြစ်ကြသည်။ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့ software ကိုအများကြီးပိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းချက်ချင်းနီးပါးမည်သည့်အသင်းကို" Bogoch ဆက်ပြောသည်။ "ဒါဟာ, ရှာဖွေစံပစ္စည်းတွေထက်ကိုယ့်ပြင်ဆင်ရန်ဘူတာတစ်ခုအကွာအဝေးကနေရှာကြည့်ရနိုင်သောနှင့်ပူးပေါင်း, သစ်ခုတ်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများနှင့်ခွင့်ပြုချက်အဘို့အဆင်သင့်ဆာဗာပေါ်မှာရှိသမျှမီဒီယာဖိုင်စေသည်။ အဆိုပါ software ကိုတစ်နာရီထက်လျော့နည်းမှာ set up ခံရနိုင်ပြီး, နီးပါးမျှလေ့ကျင့်ရေးအသုံးပြုသူများအတွက်လိုအပ်ပါသည်။ "??
အဆိုပါကုမ္ပဏီ၏နောက်ဆုံးပေါ် software ကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ရိုး 2017 တစ်ဦးစတူဒီယိုရဲ့ကွန်ယက်ဆာဗာများပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်နဲ့ browser-based ရှာဖွေခြင်းနှင့်ပူးပေါင်းဘို့နောက်ကျောအဆုံးအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ ရိုး 2017 အထိ2သန်းပေါင်းပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်အတူမီဒီယာစာကြည့်တိုက်များအဆင့်မြှင့်တင်ထားပါတယ်။ စစ်ဆင်ရေးအတွင်းအသုံးပြုသူများရိုးရှင်းစွာသူတို့စီမံခန့်ခွဲချင်သောမီဒီယာဖိုင်မှာဝင်ရိုးထောက်ပြသည်ကအလိုအလျှောက်သူတို့မည်သည့် web browser ကိုကနေပြီးတော့ access လုပ်နိုင် Low-bandwidth ကို proxy များဖန်တီးပေးပါတယ်။ ၎င်း၏ရိုးရှင်းသောဘရောက်ဇာကို interface ကိုအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ရှာဖွေရတာလွယ်ကူရဲ့မှတ်ချက်, အမှတ်အသား, အတည်ပြုခြင်း, မည်သည့်နေရာမှပိုင်ဆိုင်မှုမှတ်စာရေးသွင်း။
ရိုး၏ဆော့ဖ်ဝဲအစုံအပေါငျးတို့သကဲ့သို့ပင်, သိုလှောင်တဲ့ SAN တစ် NAS သို့မဟုတ်ရုံဒေသခံတစ်ဦး RAID ဖြစ်နိုင်ပြီး, တစ်ဦးနဲ့ Mac, Window သို့မဟုတ် Linux ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်အပြေးနိုင်ပါတယ်; ရိုးလိုအပ်ကြောင်းအပေါငျးတို့သ file system ကိုဖတျရှုနိုငျရနျရန်ဖြစ်ပါသည်။ ရိုး 2017 ကိုလည်းရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်သောကြည့်ရှုနှင့်သူတို့၏အကြိုက်ဆုံး NLE software ကိုစွန့်ခွာခြင်းမရှိဘဲရိုက်ကူးအလုပ်လုပ်စတင်အယ်ဒီတာများ်ကို Adobe Premiere Pro ကို CC ကိုများအတွက်အသစ်တစ်ခုကို plug-in ကို panel ကပါဝင်သည်။ ထို့အပြင်ရိုး 2017 အလွယ်တကူဝင်ရိုး Edit ကို, အ iPad နဲ့ iPhone တွေအတွက်ကြမ်းတမ်း-ဖြတ်အယ်ဒီတာနှင့် On-set ကိုနေ့စဉ်သတင်းစာများ Workflows များအတွက်ထိုကဲ့သို့သောပိုးစုန်းကြူးအဖြစ်တတိယပါတီ applications များကဲ့သို့ကုမ္ပဏီ၏အခြားထုတ်ကုန်များမှချိတ်ဆက်ထားပါတယ်။
ရိုး 2017 အသုံးပြုခြင်း၏အကြီးမားဆုံးအကျိုးကျေးဇူးလျင်မြန်စွာ key ကိုရိုက်ကူးရှာပြီးပြန်သုံးနိုင်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သည်အခြား features တွေအနေနဲ့ NLE ကို Workstation မသုံးဘဲ Sub-ကလစ်များနှင့်သင့်မီဒီယာများ၏ပို့ဆောင်မှုမျိုးကွဲဖန်တီးနိုင်စွမ်း, ဝေးလံသောနေရာများကနေရိုက်ကူးပြန်လည်သုံးသပ်ရန်နှင့်အတည်ပြုနိုင်စွမ်းနှင့်နောက်ပိုင်းတွင်ရှာဖွေရန်သင့်အဖွဲ့သည်အပေါ်တခြားသူတွေကိုရိုက်ကူး tag နိုင်စွမ်းများပါဝင်သည်။
ရိုးဗီဒီယို'' s ကိုလြှို့ဝှကျ Sauce
အလွယ်တကူတတိယပါတီ applications များမှ interface နိုင်စွမ်းနှင့်အတူ coupled ဒီချဉ်းကပ်မှု၏တင်းကျပ်စွာပေါင်းစည်းမှုရိုးရဲ့ပလက်ဖောင်းကတခြားဖြေရှင်းချက်ကျော်အများအပြားကွဲပြားအားသာချက်များကိုပေးသည်။ ဘေးဖယ်ယင်း၏စက်မှုလုပ်ငန်းဦးဆောင်တတ်နိုင်ထံမှ (ဝင်ရိုးစတင် Two-အသုံးပြုသူလိုင်စင် $ 495 မှာစတင်သည်; ရိုး 2017 Two-အသုံးပြုသူလိုင်စင် $ 1,295 မှာစတင်သည်), ဆော့ဝဲဖြေရှင်းချက်သည်အခြားယှဉ်ပြိုင်ရှုပ်ထွေးပေးခဲ့သည်စနစ်များကိုနှိုင်းယှဉ်စစ်ဆင်ရေးအတွင်းအစွန်းရောက်ရိုးရှင်းဆွဲဆောင်မှုရှိအောင်။ ကဖိုင်စနစ်၏ထိန်းချုပ်မှုကိုယူမထားဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုအသုံးပြုသူများကသူတို့ပြီးသားနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ကြသည်အားလုံးဖိုင်တွဲအဆောက်အဦများနှင့် Workflows သုံးစွဲဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒါဟာအစရိုးကို install တစ်ပေးခဲ့သည်ကို install ထက်အများကြီးရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပြီး, အသုံးပြုသူများကိုသော့ခတ်-in ကိုမဆိုစွန့်စားမှုမပါဘဲနောက်ပိုင်းမှာသူတို့ရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည်ကိုဆိုလိုသည်။
ယှဉ်ပြိုင်မှုယဇ်ကိုပြုရမည် vs. ရိုးဗီဒီယို
ရိုးရဲ့ယှဉ်ပြိုင်မှုအကြောင်းမေးတဲ့အခါ, Bogoch ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကယှဉ်ပြိုင်ဘာမှနှင့်ထိုကဲ့သို့သော '' sneakernet '' အဖြစ်ရှေးကသြောနည်းစနစ်နှင့်အတူတည်းခိုဖြစ်ပါတယ် "စိတ်အားထက်သန်စွာ ?? လူတွေကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာချောင် hard drive တွေအပေါ်စက်အကြားမီဒီယာရွှေ့ရှိရာ။ ဒီမှာအဓိကနည်းပညာများ Post-it မှတ်ချက်ပြုသို့မဟုတ် Excel ဖိုင်များကိုအဘယ်အရာကို drive ပေါ်တွင်တွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာမီဒီယာကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ဖို့အသုံးပြုတိုင်အောင်, စင်္ကြံချအော်ဟစ်အသွင်ရောက်အောင်ကြိုးစားကြဖြစ်ကြသည်။ အခြားအစွန်းရောက်မှာကဲ့သို့သောခေတ်မီဆန်းပြား, ရှုပ်ထွေးသောပေးခဲ့သည်စနစ်များရှိပါတယ် လွန်စွာလိုလားသော'' s ကိုဆက်စပ်မှုတွေနှင့်မီဒီယာဗဟို, ရင်ပြင် Box ကိုဖွင့် CatDV, Cantemo portal, ဒါကြောင့်ထွက်ရောအင်ဂျင်အပြင် Levels နှင့်။ ဤရွေ့ကားဖြေရှင်းချက်ရိုးမအဘယ်အရာကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာကုန်ကျနှင့်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်တစ်ဦးဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောလုပ်ငန်းအသွားအလာထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက်နှစ်ဦးစလုံး, အကြိမ်ပေါင်းများစွာရှုပ်ထွေးဆက်ကပ်။ ရိုးနှင့်မတူဘဲသူတို့ကပုံမှန်အားဖြင့်အဘယ်အရပ်ကမီဒီယာများ၏ထိန်းချုပ်မှုယူသူတို့ကိုပိုပြီးမစ်ရှင်-အရေးပါသောနည်းလမ်းအချို့ကိုအတွက်စေသည်ရသောဖောက်သည်ရဲ့ဖိုင်စနစ်, အပေါ်သိမ်းဆည်းထားသည်။ "??
ရိုး ai ။ မီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှုအဘို့အနှောင့်အယှက်ကို Artificial Intelligence ပလက်ဖောင်း။
ယင်း၏ရရှိထားသောဂုဏျပေါ်မှာထိုင်ဖို့, မရိုးမကြာသေးမီကယင်း၏ပါလာတဲ့ပစ္စည်းနှင့်အတူ၎င်း၏နောက်ဆုံးပေါ်ရာယဇ်, ရိုး ai (Artificial Intelligence), တစ်ဦးအောင်မြင်မှုများမီဒီယာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်ရှာဖွေရေးပလက်ဖောင်း, ဖြန့်ချိ, နှောင့်အယှက်နည်းပညာများများအတွက် bar ကိုမြှင့်နေဆဲဖြစ်သည်။ Post ကိုထုတ်လုပ်မှုအဖွဲ့များယခုမဟုတ်ရင်ကိုယ်တိုင်မိမိတို့၏မီဒီယာ tag ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သုံးစွဲမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ကင်မရာကိုမီဒီယာများအနေဖြင့်ယခုလို Multi-ဂဏန်း filename နှင့်အတူမကြာခဏရိုးရှင်းစွာမှာအားလုံးစီမံခန့်ခွဲခဲ့ကြမည်မဟုတ်ပါကြောင်းမီဒီယာကိုရှာဖွေနိုင်စွမ်းကနေအကြိုးပွုနိုငျကွောငျးကိုသိသိသာသာအချိန်ငွေစုနားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။
ရိုး ai ကဗီဒီယို postproduction အဖွဲ့များတိုင်းမြင်ကွင်းတစ်ခုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ် metadata ကိုဝင်များ၏လောကီတာဝန်ရှောင်ကွင်းကူညီပေးသည်။ အဲဒီအစားအသုံးပြုသူများသည်ရိုးရိုးဗွီဒီယိုတစ်ခုကနေဘောင်ရှေးခယျြပါ, သို့မဟုတ်ဝဘ်စာမျက်နှာအပါအဝင်မည်သည့်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိအရင်းအမြစ်မှပုံရိပ်တစ်ခုဖမ်းပြီး။ ရိုး ai ထို့နောက်လျှင်မြန်စွာသူ၏ contents တွေကိုအများဆုံးအနီးကပ်ပုံရိပ်ကိုကိုက်ညီမီဒီယာကလစ်များအဖြစ်သူတို့အားကလစ်များအတွက်အတိအကျ segments များ၏အဆင့်စာရင်းခွဲခြားသတ်မှတ်ပေးနိုင်သည်။
ဒီအာဏာကိုကယ်နှုတ်တော်မူရန်ပထမဦးဆုံးရေကြောင်းဖွဲ့စည်းမှုပုံစံဟာရိုးဟာရိုးဟာရိုး ai ဗီဒီယိုကိုရှာဖွေဆန်းစစ် algorithms run ဖို့ optimized အလွန်မြင့်မား throughput နဲ့ကွန်ရက်ချိတ်ဆက် Processor ကိုစနစ်ဆော့ဖ်ဝဲကို ai ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ပစ္စည်း, ai ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါရိုး ai ပလက်ဖောင်းအနာဂတ်တွင်နောက်ထပ်ဆောင်ရွက်သောဝဘ်ဆိုက်နဲ့ cloud-based အင်ဂျင်ပတ်ဝိုင်းမှ extension တခုဖြစ်တယ်, နှင့်မီဒီယာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၏ဤလူတန်းစားများအတွက်အကောင်းဆုံးရရှိနိုင်အခြေခံအဆောက်အအုံကမ်းလှမ်းရန်ရည်ရွယ်ထားသည်။ ထိုမှတပါး, ရိုးပေါင်းစပ်ပြီးရိုး 2017 နှင့်အတူ ai အော်တို metadata ကိုဖန်ဆင်းခြင်း, ပိုမိုမြန်ဆန်ထုတ်လုပ်မှု, နှင့်မီဒီယာရှာဖွေရေးအသစ်ဖြစ်နိုင်ခြေဆောင်တတ်၏နှင့်ဗီဒီယိုပညာရှင်များ၏ကျယ်ပြန့မှပြန်သုံးလို့။
Added Bogoch "သင်္ဘောရိုး ai ကျွန်တော်တို့ကိုသင်တို့သည်နောက်တဖန်လျင်မြန်စွာရှာဖွေမှပစ္စည်း tag သို့မဟုတ် log ရန်ရှိသည်ဘယ်မှာအော်တိုရှာဖွေရေးလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအတွက်တစ်ဦးစက်မှုလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်ဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။ ဒါဟာအမှန်တကယ်အောင်မြင်မှုများပါပဲ။ ကျနော်တို့အနေနဲ့ပွင့်လင်းပလက်ဖောင်းအဖြစ်က built နှင့်ရောနှောဖို့သူတို့ရဲ့ထူးခြားတဲ့နက်ရှိုင်းသောသင်ယူမှုစွမ်းရည်ကိုထည့်သွင်းပါလိမ့်မယ်တဲ့သူက Google နဲ့ MS Azure ကဲ့သို့ကျယ်ပြန့်စက်မှုလုပ်ငန်းနဲ့ cloud ဝန်ဆောင်မှုများမှအများကြီးတိုးတက်လာ၏အားသာချက်ယူမျှော်လင့်ထားပါတယ်။ "??
နောက်ဆုံး Bogoch သူကုမ္ပဏီအတွက်တိုးတက်မှုအတွက်အနာဂတ်အခွင့်အလမ်းများကိုမြင်ဘယ်မှာ၏သူ၏ရူပါရုံ shared ။ "ပထမအတိတ်ကာလထက်မီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှုအများကြီးရိုးရှင်းတဲ့နှင့်ပိုပြီးထိုးထွင်းသိမြင်စေရန်အတုထောက်လှမ်းရေးနှင့်နက်ရှိုင်းသောသင်ယူမှုနည်းစနစ်လျှောက်ထား၌တည်ရှိ၏။ ဒါဟာမသာသောဗီဒီယိုအသင်းများကိုလုပ်ပိုင်ခွင့်မှအလွန်ကြီးစွာသောလမ်းဖွင့်ပေမယ့်ကိုလည်းအတိတ်ကာလကမီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များအသုံးပြုခြင်းကိုကန့်သတ်ထားမူကြောင်းကိုမှတ်သားခြင်းနှင့်သစ်ထုတ်လုပ်ရေး၏တက်-ရှေ့ drudgery အများကြီးရှိဘို့လိုအပ်ကြောင်းကွာကြာပါတယ်။ "
သူမျှော်မှန်းအခြားတိုးတက်မှုနှုန်းအခွင့်အလမ်းအသုံးပြုသူ-generated content တွေကိုအတွက်ဖြစ်တယ်, လူတိုင်းနီးပါးသည်လမ်းတစ်အကြောင်းအရာဖန်တီးသူဖြစ်လာ။ Bogoch ကောငျးစှာအမှတ်တံဆိပ်, ဖြစ်ရပ်များအပေါင်းတို့နှင့်တကွအမျိုးမျိုးအဖွဲ့အစည်းများယခုတီထွင်ဖန်တီးမှုအသုံးချနည်းလမ်းများရှာဖွေနေဖြစ်ကြောင်းမှတ်ချက်ချ, ဤအခွင့်အလမ်းနှင့်အတူအားလုံးအသစ်ကမီဒီယာခွဲခြားနှင့်ရှာဖွေရန်လိုအပ်ကြောင်းလာသည်။ "ကျနော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေခံကျကျရိုးရှင်းတဲ့ဖြေရှင်းချက်အဘို့ကြီးစွာသောအဖွင့်လို့ထင်ပါတယ်။ " ??
နှောင်းပိုင်း 70s ကတည်းကစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဖြစ်ဘဲလျက်, ငါသည်တံခါးဝမှထှကျ '' ခြဲ့ကားပွော '' touting ကုမ္ပဏီများသည်ငါ၏ဝေစုကိုမြင်ခြင်းနှင့်မကြာမီထိုနောက်မှနေဝင်သို့ပျောက်ကွယ်တိမ်မြုပ်နှေးကွေးပါတယ်။ အတော်လေးဆန့်ကျင်ဘက်, ရိုးဗီဒီယိုစျေးကွက်ဝေစုချဲ့ထွင် 's နောက်ထပ်ပိုကောင်း၎င်း၏ကြီးထွားလာဖောက်သည်အခြေစိုက်စခန်းအစေခံရန်ပေးခဲ့သည်ဖြေရှင်းချက်အားဖွင့်, အခြေခံကျကျရိုးရှင်းတဲ့နှင့်တတ်နိုင်ဖွံ့ဖြိုးရန်၎င်း၏နည်းပညာဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်မှုထူထောင်နေချိန်မှာဖောက်သည်ဗဟိုပြုဆန်းသစ်တီထွင်မှုမောင်းထုတ်ရန်ကုမ္ပဏီ၏ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောမစ်ရှင်တစ်ဦးသေတမ်းစာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ပြင်ငါဝေးက M & E ကိုကျော်လွန်ပြီးစျေးကွက်များစွာသောလူအတွက်နှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့ရိုး ai နှင့်၎င်း၏မလွှဲမရှောင်ဗီဇပြောင်းလဲမှုတွေမှန်းဆနိုင်တယ်။ ဤသူသည်ငါကျိန်းသေတခုတခုအပေါ်မှာမျက်စိစောင့်ရှောက်ပါလိမ့်မည်တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သင်လည်းသင့်ပါတယ်။
Adobe က ဉာဏ်ရည်တု လွန်စွာလိုလားသော ရိုး 2017 ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး H264 / H265 HDR HDR / WCG HEVC စွဲငြိဖွယ်ရာ ပေါင်းစည်းမှု ပေးခဲ့သည် မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု ဆူညံသံလျော့ချခြင်း post ကိုထုတ်လုပ်မှု UHD / 4K / HD ကို ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ခြင်း 2017-07-10
ယခင်: ကို Canon C200: ရုပ်ရှင်ရုံ RAW အလင်း, အဘယ်သူမျှမပြဿနာ!
နောက်တစ်ခု: IBC 2017 မှာ Pebble သဲသောင်ပြင်စနစ်များ